Google Pixel 2 XL na-aga site n'aka nke iFixit | Akụkọ akụrụngwa
Ruo mgbe ekwentị ọhụụ gafere n'aka ụmụ okorobịa na iFixit, ọtụtụ ndị ọrụ bụ ndị anaghị ekpebi ịzụta ya ma ọ bụ. iFixit na-elekọta ikpochapụ kpamkpam ọdụ ọhụrụ ndị ahụ ruru ahịa iji chọpụta ma nrụzi ahụ dị mfe ma ọ bụ na agbanyeghị anyị ekwesịghị inye onwe anyị nsogbu na-ewere ya na a ọrụ center.
Ihe akara nke iFixit na-enye anyị sitere na 1 ruo 10, na 10 ịbụ ihe nrụzigharị kachasị nke ngwaọrụ ebe 1 na-egosi na anyị nwere ike ịtụba ya ozugbo na ahịhịa. Ngwaọrụ ikpeazụ gafere n'aka iFixit bụ Google Pixel 2 XL, ọnụ ọnụ nke onye ọ bụla na-ekwu nke ọma na nke ahụ, dị ka DxOMark si kwuo, nwere igwefoto kachasị mma na ahịa.
Google, n'adịghị ka ọtụtụ ndị nrụpụta, ahọrọghị ịgbakwunye igwefoto abụọ iji nwee ọ modeụ na eserese eserese, mana ọrụ niile na-arụ site na nhazi nke edoziri maka ya, Pixel Visual Core. Mgbe ha gbasasịrị ma weghachite Google Pixel 2 XL, ụmụ okorobịa na iFixit ha enyela ya akara nke isii n'ime 6 enwere ike, akara nke na-adịghị njọ ma ọ bụrụ na anyị jiri ya tụnyere ndetu nke akara Samsung na-enwetakarị, ọ bụ ezie na anyị enweghị ike iji ha tụnyere ha n'ihi atụmatụ nke ihuenyo ahụ, nke dị iche na Google Pixel 2 XL.
iFixit pụtara dị ka ihe dị mma na ụfọdụ akụkụ dị ka igwefoto na ọdụ ụgbọ USB-C, yana bọtịnụ n'akụkụ, ha dị mma, ya mere enweghị nsogbu iji dochie ha ma ọ bụrụ na anyị nwere nsogbu ọ bụla na ha. A na - ahụ ihe ọzọ dị mma na kposara ejiri mee, Phillips # 00, nke na - enye anyị ohere ibukọta ọnụ na - enweghị itinye ego na screwdrivers.
Ugbu a, anyị na-amalite site na isi adịghị mma, n'ihi nrapado ejiri iji dozie ihuenyo, imeghe ọnụ ga-ebute mmebi ịchọ mma dị mkpa na nsọtụ ya, dị ka anyị pụrụ ịhụ na vidiyo. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe batrị anyị ga-fọrọ nke nta ka ebukọtala ọnụ ma anyị ga-akpachara anya na usoro ebe ihuenyo ihuenyo enweghị ọtụtụ slack na anyị nwere ike imebi ya mfe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Google Pixel 2 XL na-aga site n'aka nke iFixit
HP ZBook x2, nke nwere ike ịgbanwe dị ọcha